CISCO Atsimondrano Nizaràna ody kankana sy fanafody bilarziozy ny mpianatra
Tsy nianatra ny ankamaroan’ireo ankizy mpianatra manovo fahalalana eny anivon’ny EPP sy CEG, ao anatin’ny fari-piadidiam-pampianarana Atsimondrano, omaly.
Sehatry ny fanabeazana Namoaka manampahaizana 142 ny INSPMAD
Mitombo isa hatrany ireo tanora manampahaizana eto amintsika. Niampy 142 isa indray izy ireo, mpianatra navoakan’ny sekoly ambony INSPNMAD notolorana ny maripahaizana Diplômes de technicien Superieur sy ny licence rehefa nianatra nandritra ny roa sy telo taona.
Tovovavy mpianatry ny CEG Antanimena Nentina nijery ny asa sahanin’ireo orinasam-pifandraisana
Betsaka amin’ireo ankizy mpianatry ny CEG Antanimena no maniry hiasa amin’ireny orinasam-pifandraisana maro isan-tsokajiny eto amintsika ireny rahatrizay.
Oniversite iraisam-pirenena Frantsay Hisokatra eny Ankorahotra
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny IKM Antsahavola ny fisokafan’ny biraon’ny oniversite France international Graduate School na ny FIGS etsy Ankorahotra.
« SALON DE L’ETUDIANT » Hifarana anio etsy Mahamasina
Hifarana anio etsy amin’ny lapan’ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena etsy Mahamasina rehefa naharitra roa andro ilay “Salon de l’étudiant” natokana ho an’ny volana Febroary, karakarain’ny Madajeune.
Ministeran’ny fanabeazam-pirenena Tsy maintsy vita ny fandaharam-pianarana
Betsaka ny fanahiana any anatin’ireo ray aman-dreny amin’izao fiandohan’ny taona 2018 izao mikasika ny mety hahavitan’ny fandaharam-pianarana eny anivon’ny sekoly na tsia.
Distrikan’i Sambava Omaly vao niverina nianatra ny mpianatra
Omaly vao niverina nianatra avokoa ireo mpianatra any amin’ny distrikan’i Sambava.